သင့်မှာ Motivation (စိတ်ဓါတ်လှုံ့ဆော်မှု) ကင်းမဲ့နေကြောင်း ဖော်ပြနေတဲ့ အလေ့အကျင့် (၁၀)ခု - Lifestyle Myanmar
သင့်မှာ Motivation (စိတ်ဓါတ်လှုံ့ဆော်မှု) ကင်းမဲ့နေကြောင်း ဖော်ပြနေတဲ့ အလေ့အကျင့် (၁၀)ခု
သင့်ကိုယ်သင် Shaker တစ်ယောက်လို့ ထင်သလား? Mover တစ်ယောက်လို့ ထင်ပါသလား? သင့်ရဲ့ သဘာဝအတွင်းသိစိတ်နှင့် ကြံ့ခိုင်မှုက ဘဝမှာ သင်လိုချင်တဲ့ အရာတွေပေါ်မှာပဲ အာရုံစိုက်စေသလား? (သို့) စိတ်ဓါတ်လှုံ့ဆော်မှုမရှိခြင်းက သင့်အိမ်မက်တွေကို အနည်းငယ်လက်လှမ်းမမီနိုင်အောင်လုပ်နေတာ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
သင်ဟာ လူသားဖြစ်ကြောင်း၊ ဘယ်သူကမှ အချိန်ရဲ့ ၁၀၀ရာခိုင်နှုန်းကို လှုံ့ဆော်မပေးနိုင်ကြောင်း သတိရပါ။ တကယ်လို့ သင့်ဘဝရည်မှန်းချက်တွေ (သို့) ပရောဂျက်တစ်ခုကို လုပ်ဆောင်နေရင် သင့်မှာ စွမ်းအားတစ်ချို့ ရှိနေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီအလေ့အထ ဆယ်ခုကတော့ မိုတီဗေးရှင်းကင်းမဲ့ခြင်းရဲ့ အဓိကအကြောင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။
အချိန်ဆွဲတာ အကျင့်ပါနေခြင်းက ဘဝမှာ ကြီးမားတဲ့ အရာတွေ ပြီးမြောက်ဖို့ အတားအဆီး ဖြစ်စေသလား? ဒါက ဖူးငုံစမှာပင် ဖယ်ထုတ်ပစ်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ အကျင့်ဆိုးနှင့် တူပါတယ်။ အကျင့်ကောင်းတွေနဲ့ အစားထိုးရပါမယ်။ အချိန်နဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ထိန်းသိမ်းကြပ်မတ်ခြင်းဖြင့် အချိန်ဆွဲခြင်းကို ကျော်လွှားနိုင်ပါတယ်။
၂။ စိန်ခေါ်မှုတွေကို လက်ခံခြင်းမရှိတာ
ပျင်းတာက အောင်မြင်မှုရဲ့ ရန်သူဖြစ်ပြီး အဲဒီထောင်ချောက်ထဲကို သင်မသိဘဲ တိုးဝင်မိနိုင်ပါတယ်။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ကျေနပ်စရာကောင်းတဲ့ စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုကို သင်ခံစားရပါသလား? (ဒါမှမဟုတ်) ဘာမှ ပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးလို့ ခံစားရပါသလား? ။ သင်ဟာ စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုကို လက်ခံပြီး comfort zone ကနေ ထွက်ခွာဖို့ကို ကြောက်နေတာ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ရုပ်ပိုင်းနဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ မကြီးထွားခင်မှာ သင့်လက်ရှိ အခြေအနေနှင့် သဘောထားတွေကို အကဲဖြတ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ သင်မလုပ်ခဲ့ရင် သင့်ဘဝဟာ ရပ်တန့်သွားပါလိမ့်မယ်၊ အောင်မြင်မှု မရနိုင်ပါဘူး၊ စိန်ခေါ်မှုတွေကို လက်မခံတဲ့သူဟာ ကြီးထွားနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
၃။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပညာပေးဖို့ ပျက်ကွက်ခြင်း
အထက်တန်းကျောင်းတတ်၊ ကောလိပ်ကနေ ဘွဲ့ရပြီးရင်တောင် သင်ယူခြင်းနှင့် ပညာရေးက အဆုံးသတ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါက သင့်မှတ်ဉာဏ်နဲ့ သိမြင်မှု လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို ထိန်းသိမ်းထားတဲ့ တစ်သက်တာလုပ်ငန်းစဉ် ဖြစ်ပါတယ်။ မိုတီဗေးရှင်း ကင်းမဲ့တဲ့သူအတွက်တော့ အယူအဆအသစ်တွေ၊ မတူညီတဲ့ နည်းလမ်းတွေကို သင်ယူခြင်းက အရေးမပါတော့ပါဘူး။
ရည်မှန်းချက်တွေ အောင်မြင်ဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ ခြေလှမ်းတွေကို သင်ကြားဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားရင် မိုတီဗေးရှင်း ကင်းမဲ့ခြင်းက ပြဿနာတစ်ခု မဟုတ်တေ့ာပါဘူး။ တကယ်လို့ ဒါက ကျွမ်းကျင်မှု အသစ်တစ်ခုကို သင်ယူခြင်း၊ အလုပ်တွေကို ပြီးမြောက်ဖို့ ပိုကောင်းတဲ့ နည်းလမ်းကို ရှာဖွေဖြစ်လျှင် self-education က သင်လိုအပ်တဲ့ empowerment ကို ပေးနိုင်ပါတယ်။
၄။ မရေရာမသေချာတဲ့ ပန်းတိုင်တွေကို သတ်မှတ်ထားတာ
အထက်တန်းကျောင်းတုန်းက မိဘတွေနဲ့ ဆရာတွေက “မင်းဘဝရည်မှန်းချက်က ဘာလဲ”လို့ မေးခဲ့ဖူးသလား။ သင့်မှာ တိကျတဲ့ အတွေးအခေါ် အနည်းငယ် ရှိကောင်းရှိနိုင်သော်လည်း လူငယ်တွေအနေနဲ့ ရှေ့သို့သွားဖို့ ခက်ခဲတာကြောင့် သင့်အစီအစဉ်အများစုက မရေမရာ ဖြစ်နေခဲ့မှာပါ။ လူကြီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ ခိုင်မာတဲ့ အစီအစဉ်မရှိခြင်းက မိုတီဗေးရှင်းကင်းမဲ့ခြင်းနဲ့ မသေချာမရေရာတဲ့ အနာဂတ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။
Brainstorming လုပ်ခြင်းက သင့်ပန်းတိုင်အားလုံးကို ရှင်းလင်းစေဖို့အတွက် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ နှိုင်းယှဉ်မှုအနေနဲ့ နောက်ငါးနှစ်အတွင်းမှာ ငါဘာဖြစ်ရမယ်ဆိုတာကို မျှော်လင့်ထားခြင်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ရည်မှန်းချက်တစ်ခုချင်းစီကို သေးငယ်တိကျတဲ့အဆင့်တွေအဖြစ်သို့ ခွဲထုတ်ပါ။ သင့်အောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်း ပိုထင်ရှားလာပါလိမ့်မယ်။
၅။ လက်လျှော့တဲ့ ကိုယ်နေဟန်ထား
မာရသွန်ပြေးသမားတွေ လိုင်းအစမှာ အသင့်အနေအထားနဲ့ ရှိနေတာကို သင်မြင်ဖူးပါသလား? သူတို့ရဲ့အနေအထားက ဒီပြိုင်ပွဲမှာ အနိုင်ရရမယ်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်ပြီး စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားတယ်ဆိုတာကို ပြနေပါတယ်။ ဒီကစားသမားတွေအတွက် ပြိုင်ပွဲက သူတို့စိတ်ထဲမှာ ပထမဆုံးအနိုင်ရပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘယ်လို carry လုပ်မလဲဆိုတာပဲ အရေးထားပါတယ်။
သင့်မှာ မိုတီဗေးရှင်းမရှိတဲ့အခါ ကိုယ်ဟန်အနေအထားက စိတ်ဓါတ်ကျပြီး တစ်ကိုယ်လုံးပစ်လဲတော့မယ့်ပုံ ပေါက်လာပါတယ်။ ခေါင်းကငိုက်စိုက်ပြီး အိပဲ့အိပဲ့နှင့် ရွေ့လျားနေပုံ ပေါက်လာပါတယ်။
မာရသွန်ပြေးသူလိုနေပါ၊ အောင်မြင်သူရဲ့ ကိုယ်ဟန်အနေအထားကိုသုံးပါ။ သင့်ရဲ့ကျောကို မတ်မတ်ထားပြီး ကိုယ်ဟန်အနေအထားကောင်းကို လေ့ကျင့်တဲ့အခါ ခန္ဓာကိုယ်မှာ ပိုကောင်းလာတာကို ခံစားရပါမယ်။ လူတွေက သင့်ကိုကြည့်ပြီး self-confident ရှိသူတစ်ယောက်လို့ ထင်နေပါလိမ့်မယ်။
ငါလုပ်နိုင်တယ်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မယုံကြည်ဘူးဆိုရင် သင့်ပန်းတိုင်တွေကို ဘယ်လိုအောင်မြင်နိုင်မှာလဲ? သင်လုပ်နိုင်တဲ့အရာကို မျှော်လင့်ချက် နည်းနည်းပဲထားရင် သင်ရမှာက နည်းနည်းပဲ ဖြစ်လိမ့်မှာပါ။
ပရောဂျက်တစ်ခု (သို့) ရည်မှန်းချက်တစ်ခုကို လုပ်ဆောင်နေပါက အကောင်းဆုံးရလဒ်တွေကို မျှော်လင့်ပါ၊ ကျရှုံးမှာကို ကြောက်ပြီး ကိုယ့်စံနှုန်းတွေကို မလျှော့ချပစ်ပါနဲ့။ အကောင်းမြင်သဘောထား ဆက်ထားပြီး ဘာတွေဖြစ်ပျက်မလဲဆိုတာ ကြည့်ပါ။
၇။ စိတ်လှုံ့ဆော်တဲ့ အကျင့်မရှိခြင်း
သင့်ရဲ့ motivation style ကဘာလဲ? တွေးခေါ်သူလား? လက်တွေ့လုပ်သူလား? သင့်မှာ စိတ်လှုံ့ဆော်တဲ့အကျင့်မရှိရင် ဘာကိုမှ ပြီးမြောက်အောင် မလုပ်နိုင်ပါဘူး။ ရည်မှန်းချက် ချမှတ်ခြင်း၊ အတွေးနောက်လိုက်ခြင်း ကဲ့သို့သော စိတ်လှုံဆော်မှု အလေ့အကျင့်ကောင်းကို မွေးမြူပါ။ တကယ်လို့ သင်ဟာ တစ်နေရာမှာ အားနည်းနေပါက ဒါကို ပိုအားကောင်းအောင် ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်နိုင်မလဲဆိုတာ ကြည့်ပါ။။ စီမံကိန်းတစ်ခုကို အောင်မြင်စွာ ပြီးမြောက်ဖို့ သင်အရင်က ဘာလုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာ စဉ်းစားပါ။ အနာဂတ်ကြိုးပမ်းမှုတွေမှာလည်း အောင်မြင်မှုရစေဖို့ ဒီစွမ်းရည်တွေကို အသုံးချသင့်ပါတယ်။
၈။ SELF-ESTEEM နိမ့်ခြင်း
မိမိစိတ်ကို အပျက်သဘောနဲ့ ထိန်းချုပ်ဖို့ ခွင့်ပြုတဲ့အခါ ၎င်းက သင့်ရဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို တန်ဖိုးထားမှု(self-esteem)ကို သက်ရောက်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမှ မယုံရင် ဘယ်သူ့ကိုယုံမှာလဲ? သင့်စွမ်းရည်ကို သင်မယုံဘူးဆိုရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပိုကြိုးစားဖို့ motivate လုပ်ရတာ ခက်ခဲပါတယ်။
self-defeating အတွေးတွေကို ဖော်ထုတ်ပါ၊ သင့်ရဲ့ esteem ကိုနှိပ်စက်စေခွင့် မပြုပါနဲ့။ ငါလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ သဘာထားကို မွေးမြူပါ၊ ဘယ်အရာက သင့်ကို ပြီးမြောက်စေနိုင်သလဲဆိုတာ သင်အံ့အားသင့်ရမှာပါ။
၉။ ဘယ်တော့မှ တာဝန်မယူတာ
ကိုယ်က ထိုက်တန်တယ်ဆိုတာကို သိရင်တောင် အပြစ်တင်ခြင်းကို ဘယ်တော့မှ ဝန်ခံမှာ မဟုတ်တဲ့ လူစားမျိုးပါ။ အောင်မြင်မှုရဖို့ ဘောလုံးကို ပစ်ချတဲ့အချိန်မှာ သင်တာဝန်ယူရပါမယ်။ သင့်အားနည်းချက်တွေအတွက် အခြားသူတွေကို အပြစ်တင်ခြင်းက ရေရှည်မှာ သင့်ကိုသာ ထိခိုက်ပါလိမ့်မယ်။
၁၀။ negative ဆန်တဲ့သဘောထားတွေကို ပြသတာ
လူအချို့က Pooh ဇာတ်လမ်းတွေထဲက ဝမ်းနည်းနေတဲ့ မြည်းကလေး Eeyore နဲ့တူပါတယ်။ ဘယ်လောက်ကောင်းနေပါစေ သူတို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ညည်းညူနေကြမှာပါပဲ။ ဒါက သူတို့နောက်လိုက်နေတဲ့ မုန်တိုင်းမည်းတွေနဲ့ တူပြီး လက်မှိုင်ချစရာ လေထုကို ဖြည့်ပေးနေပါတယ်။
အပြုသဘောထားရှိခြင်းက အပျက်သဘောဆောင်ခြင်းလိုပဲ လွယ်ကူပါတယ်။ negative ဆန်တဲ့သဘောထားတွေက သင့်ပန်းတိုင်တွေကနေ သွေဖည်သွားစေဖို့ ငြင်းဆန်ပါတယ်။ သင်ပြီးမြောက်ခဲ့တဲ့ positive things ပါ်မှာပဲ အာရုံစိုက်ပြီး သူတို့အပေါ် တည်ဆောက်ဖို့ ကြိုးစားပါ။